दलाल र गुलाम राज्य प्रणालीको अन्त्यका लागि ३ मूख्य हति’यारहरु ! – Halkhabar kura
५ मंसिर २०७७, शुक्रबार १३:३२
दलाल र गुलाम राज्य प्रणालीको अन्त्यका लागि ३ मूख्य हति’यारहरु !
अबको प्रश्न सरकार मात्र परिवर्तन गर्नतिर होईन राज्यको संरचनागत परिवर्तनमा केन्द्रीत हुनु पर्छ
देशलाई भ्रष्टाचार, दुराचार, लुट, डकैति, दण्डहिनता, स्वेच्छाचारिता, विदेशी हैकमको धरापमा फसाएर दल नामका अपराकर्मि विदेशी झुण्डहरुले कुर्सि र पदीय भागबण्डाको रडाकोमा नेपालीहरुलाई घुमाउन खोजिरहेका छन्। विदेशी रणनीतिमा आन्दोलन, विदेशी रणनीतिमा जुटान र विदेशीकै रणनीतिमा फुटान यीनीहरुको जन्मजात धर्म हो। देश र नागरिकका समस्याहरुलाई लिएर यीनीहरुका बिचमा कहिल्यै विवाद भएको इतिहास छैन।
अब एउटा विदेशी दलालको विकल्प अर्को दलाल वा एउछा दलाल दलको विकल्प अर्को दलाल दल भन्ने चरण गुज्रिसकेको छ। यी देशमारा अपराधिहरुसंग कुनै विचार छैन भन्ने कुरा त ०६३ सालपछि विदेशीले बोकाएका एजेन्डाहरुमा यीनीहरुका बिचमा भएको सर्वसम्मतिले देखाईसकेको छ। यीनीहरुको सामुहिक चिहान तयार पार्नु नै समयको एक मात्र माग हो। यीनीहरुलाई हुर्काउने गर्भलाई च्यातेर फ्याँक्नु नै अबको आवश्यकता हो।
अब कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा मधेशवादी भन्ने बहस बन्द गर्नु पर्छ। अबको बहस ‘राष्ट्र पहिलो’ भन्ने मान्यतामा दृढ रहेर राष्ट्रघातिहरुको विसर्जन गर्ने दिशामा केन्द्रीत हुनु पर्छ। देशका समस्या पात्रहरु मात्र होईनन्, यीनीहरुले बोकेको आयातित दर्शन, आयातित विचार, विदेशी राज्य प्रणाली, विदेशी मूल्य-मान्यताहरु र पराई स्कूलिङ समस्याका जडहरु हुन्। अबको प्रश्न सरकार परिवर्तन होईन, राज्यको संरचनागत परिवर्तन हो।
दलाल र गुलाम राज्य प्रणालीको अन्त्यका लागि ३ मूख्य हति’यारहरु
विदेशी दलालहरुले देशलाई दुर्घटनाको दिशामा धकेल्न खोजेका छन्। आफ्नो पतनलाई टार्न नसकिने देखेपछि अपराधिहरुले संकट सिर्जना गरेर जोगिन खोज्छन्। धमिलोपन बढेको बेला अन्य मौकापरस्त गलत तत्वहरु पनि सल्बलाउँछन्। देशको संकट के हो र यसको समाधान के हो भन्ने कुरामा गहिरो समझदारि हुन सकेन भने नयाँ आवरणमा विदेशीहरुले अर्को गोलचक्करमा फसाउन सक्ने खतरा छ।
मैले बुझेका ३ वटा आधारभूत समस्याहरु छन्। पहिलो समस्या सुगौली सन्धिपछि विकास गरिएको दलाल राज्य प्रणाली हो। यो प्रणाली रहेसम्म देश उँभो लाग्दैन र यसैभित्र बसेर देश बनाउने आश्वासन फटाहाहरुको गफ हो। त्यसैले सुगौली सन्धिको नव..औपनिवेशिक युगको अन्त्य गर्नु अबको जरुरी कार्यभार हो। यो कुरा नबुझ्दासम्म हामी यो दलिय गोलचक्करबाट उम्किन सक्दैनौं।
देशको दोश्रो ठूलो समस्या आफ्नोपन गुम्नु हो। दलियता र लोकतन्त्रका नाममा हामीकहाँ जे चिजहरु स्थापित गरिएका छन्, ती सबै आयातित हुन्। हामीले सोंच, विचार, मूल्य, अवधारणा, जीवन पद्धति सबैमा मौलिकता गुमाएका छौं। तसर्थ, दलालहरु विरुद्धको अबको लडाईं पुनर्जागरण अन्दोलनका रुपमा अघि बढाउनु पर्दछ। हामस्बाट खोसिएको मौलिकताको पुनर्जिवनको आन्दोलनमा केन्द्रीत हुनु पर्दछ।
तेश्रो समस्या सत्ताको सर्वोच्च्तामा आधारित राज्य प्रणाली हो। यो दलाल प्रणालीले विदेशी कब्जामा रहेको सत्तालाई सर्वोच्च बनाएर गयो र देश मार्यो। यो दलाल राजनीतिमा राष्ट्रले कहिल्यै स्थान पाएन। तसर्थ, दलालहरुसंगको लडाईंमा हामीले ‘राष्ट्र पहिलो’ को सिद्धान्तको झण्डा उठाउन आवश्यक छ। राष्ट्रलाई सर्वोपरि राखेर मात्र विदेशीत्त्व र त्यसका दलालहरुको अन्त्य गर्न सकिन्छ।
-भरत दाहालको फेसबुकबाट
Previous अब वार कि पारको लडाइँमा ओली र प्रचण्ड ! (भिडियोसहित)
Next ब्रम्हलुट : एउटा साबुनको मूल्य ३ हजार ८३१ रुपैयाँ !